Liyuu Boolisku ma Badbaadin Karaa Bariga Burbur Atoobiya – Rasaasa News
Jijig, May 3, 2014 – Qalalaase siyaasadeed oo ka qarxada Atoobiya, Ciidanka Liyuu Boolisku [CLB] muxuu ka qaban karaa ilaalinta shacabka Somalida.
Qormadan qormadii ka horaysay oo ciwaankeedu ahaa Atoobiya oo Laan-haado Saaran, ayaan ku soo qaadanay qulqulada siyaasadeed ee qoobka ku haysa Atoobiya, gunaanadkii qormada waxaan idiin balan qaadanay in aan qormo ku soo qaadan doono, muxuu qaban karaa LB? 28/4/2014.
Ciidanka LB, waxaa la unkay sanadkii 2007, ujeedada loo sameeyey waxay ahayd in ONLF uu ka dhex saaro shacabka. Ciidanka LB, ma aha ciidan rasmi ah ee waa ciidan laggaga gudbayo xaalad.
Ciidanka LB, waxaa lagu macneeyaa in uu yahay dhufays uu isticmaalo ciidanka qaranka ee Atoobiya. Waayo waxay qabtaan shaqadii uu qaban lahaa ciidanka qaranku, mana laha xuquuqda ciidanka Qaranka.
Runtii, CLB waxay qabteen hawl ayna qabteen ciidanka Atoobiya, waxayna ku khasbeen shacabka degaanka qaadashada hogaanka dawlada Atoobiya, wanaag iyo xumaan kaad jeceshay u qaado.
Fulinta arintaasna waxay waxay ku waayeen naf badan oo raqiisnimo ku baxday. Hadaad aroorta hore soo gasho magaalada Jijiga, waxaad arkaysaa ciidanka LB oo hurda dariiqyada magaalada Jijiga, waana arinta keentay in shacabku cabsadaan.
Qorshaha samaynta ciidanka noocan ah waxaa bilaabay Xayle Salase sanadkii 1964, ciidankaas oo la odhan jiray “Koofiyad Dhuub”. Waxaa uu ahaa mid shacabka uun ka shaqeeya, oo loo diro reeraha miyiga iyo cidii diida Gibirka. TPLF, waxay tix raacday Xayle.
Taliyaha guud ee LB, waa madaxwaynaha degaanka Somalida, wuxuuna hoostagaa taliska guud ee qaybta bari ee ciidanka Atoobiya xaruntiisa Harar.
Darajada CLB waxaa bixiya taliyaha guud, mana laha nidaam dawli oo lagu bixiyo dalacaada ciidanka iyo darajooyinka midna. CLB ma aha ciidan wadan iyo mid dadwaye midna, waxayna isu arkaan in ay cabiid u yihiin taliyaha, iyaga oo ugu yeedha “Aabe” oo macnaheedu yahay “kii i dhalay.”
Tababarka la siiyo CLB waa tababarka bilowga ee la siiyo askari cusub, inta ay tababrka ku jiraan waxaa la baraa af Xabashiga, waxaa kale oo la siiyaa tababar dhinaca jihaynta maskaxda iyo aaminiinsta Atoobiyaanimada.
Hubka la baro ama ay ku hawlgalaan waa qoriyaha fudud sida AK47. Gaadiidka ay isticmaalaan waa Toyota Pick up “cabdi bile” iyo baabuurta ay shacabka ka dhacaan.
Shaqada ugu muhiimsan ee CLB-ku, waa gaadh gaadhka reeraha miyiga, kuwaas oo ay aad uga adag yihiin, inta badana ka qasha xoolaha, haweenkana kufsada, maadaama ayna jirin cid dacwayn karta iyo cid looga dacwooda midna.
LB waxaa lagu bixiyaa miisaaniyada ugu badan ee degaanka, lacagtaas oo aan iyaga ku bixin, laakiin magacooda lagu qaato. Kii xanuunsada ama ay dhibaato kale ku dhacdo, wax xaquuq ah oo uu sharcigu u ogo yahay ma jiro. Kuwa ku dhaawacma dagaalada ee shaqayn kari waaya waa la ruqseeyaa bilaa xuquuq.
LB, waxay si xad dhaaf ah u cunaan Jaadka, Dajidana way cabaan, waxaa kale oo la sheegaa in cuntada loogu daro maandooriye. CLB dawlada samaysay ee Atoobiya waxba kuma aaminto, dadka asal Atoobiyaanka ahna umaba haystaan ciidan.
Degaanka Somalida wax hanti ah oo qiimo leh, waxaa ku yaal Jidka laamiga oo aan tayo fiicnayn, waxaana ilaaliya habeen iyo maalinba ciidanka Federalka. Garoonka diyaarada iyo xarumaha dawlada waxaa ilaaliya ciidanka federalka. Sababta loogu aamini waayey CLB akhristow iswaydiiya.
Aliflaha ciidanka federalka iyo kornaylka Liyuu Booliska, waxaa awood badan Aliflaha ciidanka Federalka.
CLB, way difaaci karaan Makele hadii qas ka dhaco Atoobiya oo la geeyo, laakiin u malayn maayo in colaad ka dhacda Atoobiya ay Jijiga difaaci CLB ama ay leeyihiin han masuuliyad ciidan oo ay ku difaaci shacab iyo dal midna. Sababta ha i waydiinin akhriste, kor baan ku sheegaye.
Aragtidayda Qalalaase ka dhaca Atoobiya, CLB waxay aadi duurka si ay isugu dhiibaan ONLF. Waayo in kasta oo ay tiro badan yihiin kalsooni iskuma qabaan.
Saddex Mayd oo Laga Helay Xabsiga Jijiga